I-gag ephindaphindiweyo kwi-1960 ye- Batman series series ngexesha leemidlalo ezimbini zokuqala zonyaka (kubandakanywa nomfanekiso we-Batman umfanekiso okhutshwe phakathi kwamaxesha amabini) kukuba uBatman (odlalwa nguAdam West) kunye noRobin (odlalwa yiWard Ward) baya kudibana nabadumileyo ngexesha "Batclimb". NjengoBatman noRobin beka isakhiwo sakhiwo sakhiwo, udumo luza kuvulwa iwindi kwaye luchaze. I-gag yashiywa kwixesha lesithathu (kunye neyokugqibela) lomdlalo. Apha, ke, ukuhlaselwa kweefowuni ezidumileyo ezilishumi elinesihlanu kwi-show.
Eyokuqala "iBatclimb" yenzeke ekupheleni kwexesha lokuqala, kwiNgqungquthela 29, ethi "The Bookworm Turns," eyaphuma ngo-Ephreli 1966. Umculi weenkwenkwezi uJerry Lewis (waseMartin noLe Lewis kunye noNgcaciso loProfesa ) uvula iwindi ukuba abuze uBatman ukuba ngaba uBatman ngokwenene, ngaphambi kokuba aqaphele uRobin athi, "Hayi, kufuneka ukuba, ngokuba nguRobin." Hayi, Robin! "
KwiXesha lama-20 le-Fox
Le yinto ekhohlisayo. Xa ifilimu yeBatman ikhutshwe ehlobo le-1966, yonke i-"Batclimb" idumile yayiye yaqala ukuqala, ngoko kuyacaca ukuba ukubonakala komdlali ongumdlali uGeorge Cisar kwifilimu kwakujoliswe njenge-celebrity celebrity okanye nje ihlaya. UBatman noRobin bakhwela isakhiwo esicatshangelwa ukuba bafihlakele abantu babo kwaye uRobin akakwazi ukuqonda ukuba akukho mntu wambona ababi abahlala khona ngaphambili. UBatman uchaza ukuba le ndawo igcwele izidakwa ezinokuthi zithandane naluphi na ubuqili kule ndawo ngenxa yeengcamango ezenziwe ngotywala. Emva kokuba badlula ngefestile, ngokukhawuleza, umfana onxila (odlalwa nguCisar) uvula iwindi, ukhangele kuwo aze abhebhekise phambili. UCisar wayenomsebenzi omude kwifilimu nakumabonwakude, kodwa kubonakala ngathi akunakwenzeka ukuba abaphulaphuli befilimu bathi, "Hayi, khangela, nguGeorge Cisar!" Ngoko oku mhlawumbi akayi kubala, kodwa ndicinga ukuba kwakufanelekile ukubandakanya ukuzaliswa.
Kwakuyixesha lesibini ngokwenene, xa abadumileyo besabela kwi "Bat-Mania" yexesha lokuqala lochungechunge, ukuba i-cameos yabanjwa. Ngethuba le-2 yokuqala, "Bhuqa umrhoba okhuniweyo," uBatman noRobin badibana ne- American Bandstand, umgcini weDick Clark. UBatman unqabile ukuba u-Clark (owayeseneminyaka eyisixhenxe ukusuka ekuqaleni kwe -Eve's Rockin 'Eve' yaseNew Year's Dick Clark ) wayevela ePhiladelphia ngenxa yeendlela zakhe zokuthetha. UClak uyazibuza ukuba mhlawumbi uBatman noRobin bayidimbi yeculo.
Green Hornet kunye neKato
Iiveki ezintathu emva kokuqala kwee-TV zabo (kwakhona eziveliswe ngumdali we-series Batman TV, uWilliam Dozier), iGreen Hornet (idlalwe nguVan Williams) kunye noKato (edlalwe nguBruce Lee) bahlangana noBatman noRobin kwisiqendu 7, "I-Spell yeTut." Le inyanga ngaphambi kokuba ii-duos zombini zidibene kwi-crossover episode yeBatman (isiqendu apho uBruce Lee wayevumiweyo ukuba wenqabile ukukhupha i-Burt Ward kaRobin avunyelwe ukumnqoba ekulweni).
Kwiqhosha le-11 leNkcazo yesi-2, " I-Crick King's Crimes Crimes," umculi weqhawe lomhlaba / umdaniso (kunye nomdlali) uSammy Davis Jr. umema uBatman noRobin ukuba bamve xa ehamba ngefestile yakhe. Emva kokuba benqabile ngokukhawuleza, uyabamema ukuba bambambe isenzo sakhe ixesha elithile, njengoko ngokuqinisekileyo uyabamba isenzo sabo !
UJosé Jiménez wayengumlingiswa ogqithisekayo odlalwa ngumculi uBill Dana. U-Jiménez wayenomdla kodwa wayesebenzisa i-Mexican e-Danish eyayinomsebenzi othile uchungechunge lwemisebenzi eya ku-comedic effect, ayikho enye idumileyo kunokuba uJiménez azame ukuba ngumdlali we-astronaut (wayenomdla ebonakalayo kwi -Ed Sullivan Show ukwenza i-astronaut bit. U-Sullivan wambuza wathi, "Hayi, ngoku ndiyabona ukuba unesisiphakamiso sakho sendawo kunye nawe." Uh, yintoni ebizwa ngokuba yi-helmet? "No-Jiménez waphendula wathi," Awu, andiyathemba. "). Abadlali beMercury abanobuchule bezilwanyana ezinkulu zelo mlingiswa.
Nangona kunjalo, njengoko ixesha lihamba, liye labonakala ngokugqithiseleyo kubo bonke abantu ukuba umculi omhlophe owenza isilumkiso saseMexican njengomdlalo we-comedy wayeyingozi kakhulu. Nokuba uDana wamukelwa kakhulu, kwaye wasemthatha ngokusemthethweni umlingiswa ngo-1970. KwiCandelo le-14 leNyanga yesi-2, "I-Yegg Foes eG Gotham," uJimenez usebenza njengomphathi wejaji kwisilingo sobugebengu. Emva kokuba uBatman noRobin benyuka, u-Jimenez uxelelwa ukuba yintoni enye i-jury inqume ngayo kwaye ubiza uBatman noRobin ukuba babuze ukuba bangashiya intambo yabo.
Ukulandela ezinyathelo zokukhuthazwa kwangaphambili komhlobo we-ABC, i- Green Hornet , kwisiqendu 21 seNkcazo yesi-2, "Umdlali we-Joker ongenakwenzeka," umlingisi uHoward Duff wabonakala njengomlingiswa wakhe we-Sam Stone esuka kwiFelony Squad , umdlalo wepop Kwiinyanga ezimbalwa ngaphambilana ukuba i-TV yonyaka. Ilitye yayingumqhubi wongqamzana kunye no-Jim Briggs (odlalwa nguDennis Cole), kwiqela elinobugebengu obukhulu. Abafaki-mthetho bobabini, iBatman kunye neTye, bathengisa ama-sweetries, kwaye uBatman utshela ilitye adibanise naye kuMkomishinala uGordon ukuba iLatye lifuna naluphi na uncedo. Ukuxhamla ngokukhawuleza, u-Duff wayeza kubonakala kwiNkcazo yesi-3 kaBatman njengoCabala, umyeni we-uDkt Cassandra Spellcraft owayengumdlakazi (wadlala ngumfazi wobomi bokwenene ngaleso sikhathi, i-Ida Lupino).
Kwinto engummangaliso i-comeo, kwisiqendu 26 seNyanga yesi-2, "Yiyo indlela odlala ngayo umdlalo," uBatman noRobin baya kuColonel Kiink baseHogan 's Heroes , badlala nguWerner Klemperer. Oku kuyinqabileyo, ngokuqinisekileyo, kuba iHosan Heroes yayisetyenziswe kwiNkqubela yeMfazwe Yehlabathi II kunye neG Gotham City ngo-1966 yayingenjalo. Kwakhona, akunakwenzeka ukubona uBatman noRobin bexoxa ngokuvuyisana neColonel wamaNazi (ngubani osezidolophini efuna inhloli - emva kokuba uRobin amtshele ukuba athi hi kuColonel Hogan kubo, uKlink uyamangalisa ukuba uHogan akazange Wazama ukuboleka i-Bat-rope ukuba ibalekele entolongweni!).
Into engaqondakaliyo malunga neLurch, incekukazi evela kwi -Addams Family , ebonakalayo kwiNgqungquthela yesi-2 yesiqendu 27, "Isibilini sePenguin," kukuba i -Addams Family yashiye umoya kwithuba leTV elidlule, ngoko kwakungekho Kwimeko ye-comeo ekukhuthazeni uchungechunge lwe-TV. Kwimeko nayiphi na into, u-Lurch (wadlala nguTed Cassidy), wanikela ngefestile ngokugqibeleleyo (ngelo lizwi elizwini lakhe), "Owe, nguwe, Batman, undinike ngokuqala."
I-20 yeXesha le-Fox Telvision
Umculi owaziwayo waseHawaii uDon Ho wenza ukubonakala kwiNkcazo yesi-2 isiqendu 30 "I-Bat's Kow Tow." Ingoma enkulu yeHo, "Tiny bubbles," yayisemaphatlalweni epapa ngexesha eli qela likhutshwe ngoDisemba ka-1966. URobin uyothuka ukumbona, kwaye uchaza ukuba useGrham ukuzama ukubuyisela umhlaba IHawaii ilahlekile. Ukwabeka kwakhona ukuba iBat-Rope ingabuyiselwa ekhaya ukufumana iikonkco ngaphandle kwemithi.
Kwiintsuku ezintathu ngaphambi kweKrisimesi ngo-1966, isiqendu sama-2 seNyanga yesi-2, "I-Duo i-Slumming". Kulo, uBatman noRobin badibana noSanta Claus, badlala ngumdlali weentlobo (kunye ne-cowboy comedic sidekick) rhoqo kunye noAndy Devine. USanta unikela ukuzisa izipho kuBatman noRobin ukuba bamxelele apho i-Bat-Cave ikhona khona. Bavuma kwaye uyabaxelela ukuba uya kufumana izipho kuwo, nokuba kufuneka adibanise iBat-Pole esikhundleni se-chimney!
Umsakazo owaziwayo kunye nomnumathotho weTV, u-Art Linkletter, inkwenkwezi yeendwendwe kwiNgqungquthela yesiqendu 49, "I-Catwoman iya kwiKholeji." I-Linkletter mhlawumbi iyaziwa ngokubanzi kwicandelo layo elide elibhekiselele kumabonwakude, i- Art Linkletter yeNdlu yeNdlu , apho waxoxwa ngabantwana ababizwa ngokuthi "Kids Say Darndest Things." Nangona kunjalo, naye wabamba umdlalo wemidlalo yeTV ukususela ngo-1954-1960 othiwa Abantu Abamnandi , apho ayeya kubacebisa abantu ukuba benze imisebenzi yobuqhetseba ngemali. Umboniso wawudume kakhulu kangangokuthi kwaze kwaba yile movie (kunye ne-Linkletter idlala inguqulelo)! Ngoko kwiBatman yakhe yeza, i-Linkletter ixelela uBatman noRobin ukuba ufuna abantu abafuna ukuphinda baqalise ukuphinda baqalise abantu ukuba baxhamle kwaye bafuna ukwazi ukuba uBatman uyazi naziphi na abaviwa abalungileyo, njengabantu abathandayo okanye abanezibini. UBatman uchaza ukuba akazi naziphi na abaviwa abafanelekileyo (ebona ukuba i-Joker, i-Penguin ne-King Tut ihlala entolongweni). I-Linkletter iyayiqonda, nangona ephawula ukuba ukukhangela kuye "kukunyuka izindonga."
Inkwenkwezi yefilimu yembali u-Edward G. Robinson kungenzeka ukuba ngumdlali ohlonishwayo kakhulu ukwenza i-cameo kwiBatman, ebonisa kwiNkcazo yesi-2 isiqendu 52, "Ukuneliseka kukaBatman." URobinson, omnye wodumo oludumileyo lwama-villains kwimbali yefilimu (evela ku-Rico eKesari Kesare ukuya eRocco kwi- Key Largo ). Kwakunjalo umqokeleli wezobugcisa, kwaye oko kwakungumthombo we-cameo yakhe, njengoko achazela kuBatman noRobin ukuba edolophini ngenxa yemifanekiso yokudweba ebonakalayo kwimbonakalo. Emva kokuba baxubushe ubugcisa obuncinane, uBatman uqaphele ukuba akanalo ixesha lokuqokelela ubugcisa njengoko exakeke kakhulu ukuqokelela izigwenxa. Kodwa uRobin uthi, ukuba iqoqo labo lomgca wegugs luhlobo olunjengezobugcisa. URobinson uxela ngokuxelisayo ukuba konke esikwaziyo, uM Mona Lisa mhlawumbi wayeyi-mug shot, yeentlobo. Imfihlakalo kuBatman ukufumana umdlali onjalo odumile ukwenza i-comeo ilele kwiRobinson ibe kwi-20 ye-Century Fox iqashiso ukwenza iimvavanyo zokwenza udidi lukaDkt. Zaius kwi- Planet ye-Apes ezayo. Ekugqibeleni wagqiba ukudlula indima.
KwiNgqungquthela yesi-53 yeSihlandlo sesi-2, "u-King Tut's Coup," udumo oludumileyo kunye nomlobi woluntu u-Suzy Knickerbocker wenza okokugqibela kwafika eBatman ukuba singakwazi ukubiza ngokukhuselekileyo "udumo oluzayo". U-Knickerbocker, igama lomnxeba u-Aileen Mehle, naye wayesebenza rhoqo kwi-panelist kwimiboniso yezemidlalo emide, yintoni umthombo wam ?, loo nyaka (ixesha lokugqibela lomboniso). U-Knickerbocker uchaza ukuba usekudolophini kuba uvalelwa ukuba umgidi-mali uBruce Wayne "ungomnye wee-hippies," kunye noWiney Manor wakhe omkhulu. Utshela i-Dynamic Duo ukuba uya kubagxotha kwelinye lamakholomu ayo, "phakathi kwe-Acapulco no-Grace Grace." URobin uthi: "I-jet engcwele isetyenziswe!"
Njengoko ndikhankanyile kwi-Suzy Knickerbocker yokungena, i-hers yayingu-lasto yangoku ukuba ungabiza ngokukhuselekileyo "udumo oluza", njengoko i-window ye-Batman yokugqibela yayifikile kwisiqephu sesibini sokugqibela se-Season 2, "Ice Spy," kunye yabonisa uKyril Nkosi, umrhwebi waseBrithani owayeyaziwa ngokuthengisa ii-carpets kwindawo enkulu yaseLos Angeles ngawo-1960. Waye wabizwa ngokuba ngu "King Carpet." I-jingle yakhe, "Yiyo yinto ephathekayo ongayifumana esuka kuCyril Nkosi," yaziwa kakuhle ngexesha eliseLos Angeles. Kwimeko nayiphi na into, iNkosi yathengisa umvelisi waseBatman uWilliam Dozier amanye ama-rugs axabisekileyo asePersi waza wahlawulwa kwi-comeo yakhe, apho iNkosi iqhubela phambili ukukhuthaza ishishini lakhe kwingxoxo esheshayo kunye noBatman noRobin. Ukuba oku bekukho ulwalathiso lweeWowos zeFowuni ezazihamba phambili, ndicinga ukuba yinto engcono kakhulu ekugqityiwe ngayo nale nqaku!
Abaqhubi be-Top 24 abavela kwi-Season 7 ye "American Idol"
"Allmächt'ger Vater" Iingoma kunye neNguqulelo
Ukukrazula imimoya engafunekiyo
Imfazwe Yehlabathi II: I-Admiral Graf Spee
Izibambiso zesiLwimi zesiTali: i-Nascere
Isingeniso kwi-Heraldry - A Primer for Genealogists